War CUSUB oo laga helay Sheekada Hazard iyo Chelsea…..(Taageerayaasha oo aad u Walaacsan) – Gool FM
War CUSUB oo laga helay Sheekada Hazard iyo Chelsea…..(Taageerayaasha oo aad u Walaacsan)
(London) 25 Nof 2018. Taageerayaasha Chelsea ayaa wadnaha farta ku haya kaddib warar Cusub oo sheegaya in kooxdoodu ay ku dhibtooneyso sidii ay heshiis cusub uga saxiixan lahayd xiddigooda Eden Hazard kaa oo ay si waali ah ugu raad joogto Real Madrid.
Qandaraaska uu Stamford Bridge ku joogo xiddiga reer Belgium ayaa ka dhacaya 2020, blues ayaana wax guul ah ka gaarin wada hadalada heshiis kordhinta iyadoo ay jirto inay bilooyinkii dhawaa u bandhigeen dalabyo dhowr ah sida uu warinayo warsidaha OK Diario.
27-jirka ayaa heshiiskiisii ugu dambeeyay ee Chelsea saxiixay bishii Feebaraayo ee 2015 wuxuuna ahaa xiddiga ugu mushaarka badan kooxda 200,000 oo bound usbuuciiba.
Balse Kante ayaa ka sara maray kaa oo usbuucan qalinka ku duugay heshiis shan sano ah uu usbuuciiba ku qaadan doono 290,000 oo bound.
Hazard marna ma uusan qarin rabitaankiisa ku aadan Real Madrid waxaana laga yaabaa in riyadiisa ay u rumowdo bisha Janaayo marka uu dib u furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Los Blancos ayaa ku jirta waqti xun tan iyo sidii ay uga tageen Ronaldo iyo Tababare Zidane waxaana shalay mashaqada ku sii badiyay Eibar oo 3-0 ku suul daartay.
Waxaana iminka la arkaa inay ugu dambeyn u soo dhaqaaqdo dhanka Hazard si ay isku adkeyso.
Haddaba Blues ayaa badelka Hazard ka dhigan karta walaalkii Thorgan Hazard kaa oo xilli ciyaareedkan 10-gool u dhaliyay Borussia Monchengladbach isla markaana caawiyay 5-kale 13-kulan uu ciyaaray.
Xiddigaha Lyon ee Houssem Aouar iyo Nabil Fekir ayaa sidoo kale usbuucyadii dhawaa lala xiriirinayay kooxda reer London.
"Ma Fahmin Sababta uu Sarri sidaan oo dhan ugu aaminsan yahay Jorginho.".